Ichi chichava chitsva cheganda Loop tambo dzeApple Watch | Ndinobva mac
Ichi chichava chitsva cheganda Loop tambo yeApple Watch
El nhamba yemabhande ayo Apple akawanikwa kwatiri zviri pamutemo zvikuru. Kana isu tikafungawo nezvechitatu-bato tambo, iyo nhamba inogona kuve isina muganho. Tsinga yakamirirwa namabhande kubva pakatangwa Apple Watch, zvingangove kuti Apple chete ndiyo yainge yaronga.
Mugore rese, Apple inoburitsa huwandu hwakawanda hwemabhande, tambo dzemarudzi ese uye neakawanda mavara uye isu tatoita. Nhasi tiri kutaura nezve nhanho nyowani yemabhande angave ave kuda kusvika zviri pamutemo kuApple Chitoro, kunyanya huwandu hweganda Loop tambo.
Iyo yazvino renji yematehwe loop tambo inowanikwa mumavara peacock, citrus yero, caramel brown uye nhema, tambo iyo inongowanikwa chete kune 42/44 mm modhi uye iri mutengo pa 99 euros. Sekureva kwevakomana pa9to5Mac, vachidonongodza reddit post yakatumirwa nezuro, Apple iri kuronga kudzoreredza iyo color gamut yeLeather Loop akateedzana, iyo revamp iyo inogona kudzora huwandu hwesarudzo kune mavara: nhema, bhuruu, tsvuku uye shava.
Loop yeganda tambo parizvino inowanikwa muApple Chitoro
Sezvatinogona kuona mumifananidzo, uku kugadzirisa yaizoperekedzwa neshanduko dhizaini, sezvo kusiyana neazvino, zvinongedzo (zvekuidaidza neimwe nzira sezvo zvisiri zvechokwadi) zveiyo nyowani, hazvisvike pamucheto webhanhire, asi zvinopera zvishoma pamberi pezvi, zvichinyatso shandura dhizaini yatinopa izvozvi.
Mifananidzo iyo inoperekedza posvo yakaburitswa paReddit, inosimbisa kuti yakawanikwa muVietnam, mune yemagetsi chitoro, padyo nenzvimbo iyo Apple parizvino iri kufambisa iyo kugadzirwa kwemidziyo mizhinji yemidziyo yako. Nekudaro, pachikamu chesimbi chetambo chinonamira kuApple Watch, inogona "Kusunganidzwa kuChina", saka zvinogona kunge zviri prototypes dzakagadzirwa kuChina dzakatumirwa kuVietnam kunogadzirwa serial.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ichi chichava chitsva cheganda Loop tambo yeApple Watch
Bug mune macOS 10.15.5 inodzivirira kugadzira mabhaotable bootkups